Weriyeyaasha Somalia ee kenya oo cod aqlabiyad leh ku doortay hogaan+sawiro
Monday July 05, 2010 - 05:41:14 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Nairobi 12 Setember 2009
Doorasho loo agaasimay heer Qaran ayna ka qeybgalayeen dhamaan Weriyeyaasha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya,Warfidiyeeno ka kala yimid Somalia,Uganda,Ethiopia,Somaliland iyo Jibouti ayaa ka dhacday Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Doorashada oo ay kormeerayeen goobjoogayaal loo xulay,oo isugu jiray rug cadaayaasha Saxaafadda iyo siyaasiyiin laga xusi karo Mohamed Ahmed Teera,Abdulkadir Mohamed Mursal,Hassan Ali Kuuriye iyo Cibaar Sheik Bashiir ayaa Hoolka Xarunta Tala bixinta iyo shaqaaleeynta ee Kalsan ka bilaabatay labadii duhurnimo,halkaas oo ay iskugu tageen 82 Weriyeyaal ka soo barakacay Somalia.
Doorashada waxaa lagu furay Aayadaha Qur'aanka Kariimka kadibna waxaa la akhriyay jadwalka doorashada u dhaceyso,waxaa tartanka Gudoomiyenimada Weriyeyaasha qurba joogta Somalia ee Kenya isu sharaxay laba Weriye oo kala ah,Mohamed Siidii iyo Ibrahim Da'ud Gentlemen.
Labada Musharax ayaa ka hadlay xaflada doorashada,wuxuuna mid walba Weriyeyaasha u akhriyay barnaamij ka turjumayay waxqabadkiisa hadii doorashada uu ku guuleeysto iyo sidoo kale taariikh nololeedkiisa.
Khabiiradda Saxaafadda ayaa lagu soo dhaweeyay Microphone-ka,waxayna jeediyeen khudbado la xiriiro sida ay ugu faraxsan yihiin in Weriyeyaasha Somalia ee ku sugan qurbaha isu abaabulaan heer Qaran,si ay Aayahooda uga tashadaan.
Rugcadaayaashaa Saxaafadda Somalia waxay Weriyeyaasha Soomaaliyeed kula dardaarmeen inay adkeeyaan midnimadooda,isna qabsadaan gacmaha.
Waxaa biloowday tartankii doorashada oo ahaa codeeyn qarsoodiya,waxayna ku codeeynayeen sanaadiiq muuqaal ahaan laga dhex arkayo ,warqada codeeyaha .
Doorashada oo ahayd dhabo looga gudbayay kala qobqobnaanta Saxaafadda Somalia ee qurbaha ku nool,waxay doorteen si dimoqoraadiyada hogaanka Weriyeyaasha Somalia ee ku nool Kenya.
Gudigga doorashada ee codadka tirinayay,waxay ku dhawaaqeen in Mohamed Abdullahi Siidii helay,47 Cod halka Ibrahim Da'ud Gentlemen helay 30 Cod,sidoo kalena 2 cod ayaa halaabay,3 Weriye ayaan codeeyn,waxaana sidaas ku guuleeystay Mohamed Abdulahi Siidii.
Musharaxa Mohamed Abdullahi Siidii waxaa codadka u tirinayay Said Omar Baaffo,sidoo kalena Musharaxa la loolamay ee Ibrahim Gentlemen waxaa codadka u tirinayay,oo uu wakiishay Jawahir Urur Nageeye.
Jawaahir Urur Nageeye,waxay ka maqsuuday sida dimoqoraasiyada leh ee loogu codeeyay Musharaxa ay wakiilka u ahayd.
Weriyeyaashii ka qeybgalay doorashada waxay hambalyo gaara u jeediyeen gudigga qabanqaabada doorashada,Gudoomiye Fuad Mohamed Elmi,Ku xigeenka Bishaaro Mohamed Ibrahim,Xoghaye Farah Blue,xubin Daa'uud Abdi Daa'uud,waxaana sidoo kale loo mahadceliyay dhamaan dadkii gacanta ka geystay qabsoomida doorashada guusha ku dhamaatay sida xarunta Talabixinta iyo shaqaaleeynta kalsan,Odayaasha Saxaafada Somalia,dhaqtarka weyn ee Dr Mohamud ahna maamulaha rugta Caafimaadka Al Hidaaya iyo siyaasiga Soomaaliyeed ee Cibaar Sheekh Ali.
Tani waa biloowgii dimoqoraadiyadda Saxaafadda Somalia,waxaana ka dhacay Kenya doorasho taariikhiya oo Weriyeyaasha aad uga maqsuudeen.waxaana la filayaa inuu Gudoomiyaha inuu magacaabo xubnaha la shaqeeyn doono,iyadoo sidoo kalena maalinta sedexaad ee Ciidda la qaban doono xaflad lagu caleema saaraa Gudoomiye Siidii.
By Mohamed Abdi Noor Sacuudi